ရှစ်လေးလုံး စိတ်ဓာတ်ဟူသည် . . . – Eleven Media Group
ရှစ်လေးလုံး စိတ်ဓာတ်ဟူသည် . . .
ယနေ့ဆိုလျှင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးသည် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအရေးတော်ပုံကြီး၌ ပါဝင်ခဲ့ကြသော အသက်အငယ်ဆုံး လူငယ်များသည်ပင်လျှင် ယခုအခါ အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ရှိကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတမ်းအချို့ ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရှေ့မျိုးဆက်က နောက်မျိုးဆက်အား လက်ဆင့်ကမ်း ပြောကြားခဲ့ကြသောကြောင့်လည်းကောင်း ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများအပြား အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးအကြောင်းကို သိသင့်သလောက် သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး၏ သမိုင်းကို ပြည့်စုံအောင် ရေးသားပြုစုထားခြင်း မရှိသေးပေ။ ၎င်းအပြင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးအား အမျိုးမျိုး ပုံဖျက်ပြောဆိုခဲ့ကြသောကြောင့် နှောင်းလူများ တလွဲမှတ်ထားခဲ့ကြသည်များလည်း ရှိနိုင်သည်။
အမှန်တကယ်၌ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးသည် တစ်နိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ပါဝင်ခဲ့သော အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ပြိုင်နက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့် ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးအရေး တော်ပုံကြီးဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်တည်းကမျှ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတည်းကမျှ လှုံ့ဆော်ခဲ့သောကြောင့် အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ခါးသီးစွာ ကြိတ်မှိတ်ခံလာခဲ့ရသော ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး နိုးကြားလာကာ တညီတညွတ်တည်း ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွားအောင် အမှန်တကယ် လှုံ့ဆော်ခဲ့သောအရာမှာ ကြိတ်မှိတ်ခါးစည်းခံခဲ့ရသော ပြည်သူလူထု၏ ဒုက္ခတရားများနှင့် အာဏာရှိသူတို့၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများသာ ဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အကြီးဆုံး၊ အင်အား အများဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး လူထုအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ထိရောက်စွာ ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် အာဏာရှင်များ ယာယီနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရသော အရေးတော်ပုံလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရေးတော်ပုံကြီးသည် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင်လည်း အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအစုအဖွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အာဏာရှင်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ ဒုက္ခတရားကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှ သိရှိသွားကြသည်မှာလည်း အဆိုပါ အရေးတော်ပုံကြီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များနှင့် လက်နက်ကိုင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ ဟန်ချက်ညီညီ စုစည်းညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် ယခုတိုင် မအောင်မြင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရေးတော်ပုံကြီးကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အရပ်သားအစိုးရဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် မတရားဖိနှိပ်မှုများ မှနေ၍ လုံးလုံးလျားလျား လွတ်မြောက်သွားပြီဟုကား မဆိုနိုင်သေးပေ။ ထို့အတူ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးက လိုလားခဲ့သော စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီမှာလည်း အလှမ်းဝေးလျက်ပင် ရှိသေးသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အာဏာရှင်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မတရားမှုများကို ခေါင်းငုံ့မခံဘဲ စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် တွန်းလှန်ရဲသော စိတ်ဓာတ်သည် ရှစ်လေးလုံး စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ယင်းစိတ်ဓာတ်ကို မျိုးဆက်အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းကာ လက်ဆင့်ကမ်းပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
(သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ အာဘေ်ာ)
Posted in EditorialsTagged ရှစ်လေးလုံး စိတ်ဓာတ်ဟူသည် . . .